directional Adjustments စီးပွားရေးကျဆင်းမှုနဲ့ LED Gimbal အလင်း - LED ကို Down Light က, LED ပြောက်အလင်း,,LED ကို Track အလင်း,LED ကိုရေလွှမ်းမိုးအလင်း,LED ကို Linear အလင်း,LED လမ်းအလင်းစက်ရုံထုတ်လုပ်သူ
နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » directional Adjustments စီးပွားရေးကျဆင်းမှုနဲ့ LED Gimbal အလင်း
directional Adjustments စီးပွားရေးကျဆင်းမှုနဲ့ LED Gimbal အလင်း
Suitable places: Commercial entertainment, Car Park, Shop, lounge, bank, Church, Cinema, Gallery, နေအိမ်, Garage, Hospital, Hotel, မီးဖိုခန်း, Meeting Room, Museum, Office, Restaurant, School, Shopping Mall, Sitting Room
Suitable places: Commercial entertainment, Car Park, Shop, lounge, bank, Church, Cinema, Gallery, နေအိမ်, Garage, Hospital, Hotel, မီးဖိုခန်း, Meeting Room, Museum, Office, Restaurant, School, Shopping Mall, Sitting Room.
အလင်းကိုရင်းမြစ် LED cob
ပစ္စည်းအမျိုးအစား Down Lights
ဆီမီးခွက်အလင်းအား flux(LM) 2800
ဆီမီးခွက်အလင်းအားစွမ်းရည်(LM / w) 80
ထုတ်ကုန်အမည် directional Adjustments စီးပွားရေးကျဆင်းမှုနဲ့ LED Gimbal အလင်း
We areamanufacturer specializing in Aluminium housing & Aluminum heat sink for led down light, led spotlight, မြင့်မားသောပင်လယ်အော်အလင်း ဦး ဆောင်ခဲ့သည်, ဦး ဆောင်လမ်းမီး, led tube light and led grille light with different surface treatments and colors more than 10 နှစ်ပေါင်း.
We are aluminum hardware factory located in Foshan city, welcom OEM & ODM ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, ငါတို့သည်သင်တို့၏နမူနာသို့မဟုတ် CAD / 3D အားဖြင့်ပုံဆွဲသည်နှင့်အညီထုတ်လုပ်နိုင်ဘူး.
Q1. ငါစမ်းသပ်ဖို့နမူနာရှိနိုင်မလား? မည်သည့် MOQ မဆို?
တစ်ဦးက: ဟုတ်ကဲ့, 1-200PC နမူနာများနှင့်ရောနှောနမူနာအမိန့်ကိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်. MOQ မရှိပါ, 1pcs အဆင်ပြေပါတယ်.
တစ်ဦးက: Sample order is 3-5 ရက်ပေါင်း, mass orders is 7-15days which will depend on the quantity.
တစ်ဦးက: Express&Air shipment by DHL, UPS, FedEx or TNT, arriving time is about 5-10days, Sea shipment, depend on the arriving port, about 15-35days, check with our sales please!
တစ်ဦးက: 1. Contacting our sales with all the products and shipment details.
တစ်ဦးက: 2. Arrange production after receiving the deposit from you, and ship to you when received the balance.
တစ်ဦးက: We accept online payment, L/C, D/A, D/P, T / T, Western Union, MoneyGram, PayPal.
Q6. ဒါကြောင့်အလင်းအပေါ်မှာငါ့လိုဂို print ထုတ်မှ OK ကို Is?
တစ်ဦးက: ဟုတ်ကဲ့. သို့သော် MOQ 1000pcs လုပ်ဖောက်သည်ရဲ့လိုဂိုလျှင်လည်းမရှိ.
LED ကို Downlight, COB LED ကို Downlight, LED Downlight ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်းသူ
57W 10W 18W ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်က Round နှင့်ရင်ပြင် Trimless LED ကို Downlight စီးပွားရေးကျဆင်းမှု Lighting ကရိယာ W က
LED ကိုစီးပွားရေးကျဆင်းမှု Downlight လူမီနီယမ် SKD LED ကို Down အလင်းကရိယာအိမ်ရာ
ဟိုတယ်များအတွက်မိုးလုံလေလုံနဲ့ LED မီး Spotlight